Ayikho imithetho ejwayelekile abazali okufanele bafunde mayelana nokukhulisa izingane, ngoba azikwazi ukufaneleka kuzo zonke izimo zokuphila nanoma yiziphi izimo, leyo mithetho ayikho. Zonke izingane zihlukile futhi ingane ngayinye iyodwa, kusukela ekubukeni kuya kumlingiswa. Noma kunjalo, kusekhona izinto ezingafanele zisetshenziswe lapho zikhulisa noma yimuphi ingane. Manje sizoxoxa ngalokho abazali abangenakukwenza.
Ngakho-ke, yiziphi izinto okufanele zigweme uma ziphakamisa iziqu:
Ungangcolisi ingane yakho
Ngezinye izikhathi, ngaphandle kokuqaphela, hhayi ngenhloso, singasho kumntanami: "Awukwazi ukucabanga noma yini enye? Kungani unenhloko ehlombe? "Futhi yonke into enjalo. Futhi ngaso sonke isikhathi lapho ingane izwa izinto ezinjalo ezivela kithi, isithombe sakhe esihle siyaphela. Ngakho-ke, bazali, khumbula ukuthi izinto ezinjalo akudingeki ukuthi zisho noma yiziphi izimo ezihlelekile.
Omama nabaningi bamtshela ingane ukuthi: "Uma uphinde ungesihlalo sobukhosi, ngizo ..." noma "Noma uzokwenza manje, lokho engikushilo kuwe noma kimi!". Khumbula ukuthi noma nini lapho ingane izwa, kungcono ukuthi ayikuphathe noma ugcwalise izicelo zakho. Wena ngokwakho ufundisa ingane yakho ukuba ikwesabe futhi ikuzonde. Ayikho ingozi engakusiza kuwe, ngoba ukuziphatha kwengane kungabe kubi kakhulu.
Ngokuvamile, ngisho nasemgwaqweni noma e-cinema, ungabona ukuthi ingane izokwenza kanjani okuthile, futhi umama uthi: "Manje, ngesikhathi esisodwa, ngithembise ukuthi ngeke uphinde wenze lokhu," kuyilapho ingane, izithembiso. Kodwa-ke, ngemva kwengxenye yehora umntwana usaphinda lokho akuthembise ukuthi ngeke aphinde akwenze. Abazali bacasulwa futhi bacasukile, isilo sithembisiwe. Khumbula ukuthi ngesifungo isithembiso sifana nomsindo ozwakalayo, akazi ukuthi uyini. Ngempela, lesi sithembiso sihlale sihlangene nekusasa, futhi izingane zihlala kuphela namhlanje futhi kulo mzuzu, okwenzeka ngalesi sikhathi. Uma ngabe ingane yakho ihloniphekile futhi ibucayi, izithembiso zakho ziyoba nomqondo wecala kuye, futhi uma, ngokuphambene nalokho, kuyadelela kakhulu mayelana nemizwa, khona-ke uzozihlakulela ngokwakho. Ngempela, wonke umuntu uyazi ukuthi ungasho lutho, kodwa uyenze ...
Ungamnakekeli kanzima kakhulu
Uma uzomvikela ngaphezu kwengane, ke, ngokuhamba kwesikhathi, mfundise umqondo wokuthi yena uqobo uyindawo engenalutho futhi akakwazi ukwenza lutho ngaphandle kosizo lwakho. Amama namadodakazi amaningi abakholelwa ukuthi ingane ingenza izinto eziningi yedwa, inganqunywa. Isiqubulo sakho kufanele sibe yincazelo: "Ungalokothi wenze okwenziwe yedwa lokho angakwenza yedwa".
Ungadingi ingane ngokulalela okuphuthumayo
Cabanga nje ukuthi umyeni wakho uthi: "Sithandwa sami, wenzani lapho? Ake sishiye konke futhi masinyane ngenze ikhofi! "Mhlawumbe, ngeke baphazamise ithoni enjalo ehlelekile. Ngokufanayo, ingane ayithandi uma ufuna ukuba agcwalise isicelo sakho ngokuphuthumayo, ashiya yonke ibhizinisi lakhe, ngaphandle kokubambezeleka kokubili.
Ungamthandi ingane yakho
Manje sikhuluma ngokuvunywa. Izingane zizwela kakhulu, ngakho zizwa ngokushesha lapho abazali bazo bezinzima kakhulu noma, ngokuphambene nalokho, besaba ukuzinzima. Kulezi zikhathi ukuthi izingane zidlula imingcele evunyelwe, futhi abazali abakunaki noma bamane besaba ukwenqaba ingane yabo. Ngakho-ke, ufaka enganeni ukuthi isiqiniseko sokuthi kukhona okungafani kuzo zonke imithetho, ngakho-ke kufanele nje uzame kancane, ukuze konke kube njengoba kuthanda.
Isibonelo, ngoMgqibelo unomoya omuhle futhi wena ngokwakho uvumela ingane ukuba yenza konke okuvinjelwe kuye noma izinto ezithile. Kodwa ngoLwesibili, lapho eqala ukwenza lokho owamvumele ngoMgqibelo, uyamthuka futhi uthi awukwazi ukwenza lokhu. Lapha, zibeke endaweni yezivuthu. Ungafunda kanjani ukushayela imoto, uma ngoLwesithathu noLwesine ngokukhanya okubomvu awukwazi, kodwa ngezinye izinsuku ungakwazi?
Khumbula ukuthi izingane akuzona abadala, ngakho zidinga ukulandelana kwezinqumo nezenzo.
Awudingi kusuka encane engafani nesikhathi sakhe
Ungalindeli emntwaneni wakhe oneminyaka emibili ubudala, ukuthi ulalela njengeminyaka emihlanu, ngoba ngale ndlela ungathuthukisa kuye kuphela ukungathandi Xsebe, hhayi ukuziphatha okuhle.
Akudingekile ukuba kudingeke ukuba ingane ikhule ngokwanele, engakwazi ukuyenza, ngoba lokhu kuyoba nemiphumela emibi ekuthuthukiseni ukuziqaphela kwayo.
Ungakhulumi kakhulu ngokuziphatha.
Thina nsuku zonke sitshela ingane yethu amagama angama-1000 okusola. Uma nje uthatha futhi ubhale phansi wonke amazwi ingane ezwayo usuku bese ebavumela ukuba balalele abazali babo, ungasho amaphesenti angukhulu ukuthi uzokwesaba. Yini ongayitshele izingane zakho! Ukukhubeka, ezinye izindaba, izinkulumo zokuziphatha, ukuhleka usulu, izinsongo ... Ingane nje "inqamule" ngaphansi kokugeleza kwakho kokukhuluma kanye nomthelela wakhe. Lena yindlela kuphela engakwazi ukuzivikela yona, ngakho ufunda ngokushesha ngale ndlela. Ngenxa yokuthi ingane ayikwazi ukuvala ngokuphelele, iqala ukuzwa imizwa, ngenxa yalokho, ingane ihlambalaza.
Ungathathi isifuba ilungelo lokuhlala ingane
Ake ucabange ngomzuzu owodwa ukuthi ukhulise isibonelo esihle somntwana: uhlale ehlonipha abantu abadala nabantu asebekhulile, abahlubuki ngaso sonke isikhathi, angahlala ehlolwe yonke indawo, uhlala ethule futhi enokuthula, wenza yonke into oyicelayo. Unqatshelwe noma yikuphi ukuzwa okubi - unempilo, unembeza, uthembekile. Mhlawumbe esimweni esinjalo sithintana nabantu abadala? Noma yisiphi isazi sezengqondo sizokutshela ukuthi ingane "engumzekelo" ayikwazi ukujabula. Ngenxa yokuthi "Mina" wakhe kufihliwe ngaphansi kwegobolondo, kodwa ngaphakathi kwakho ngokwakho uye wakha futhi wakha ezinkingeni ezinkulu ezingokomzwelo.
Indlela yokukhulisa indodana njengendoda, uma ungumama ongayedwa
Imithetho yokuphepha yengane nabazali bayo
Indlela yokufundisa izingane zamawele?
Uhlabela empilweni yengane
Izimiso ezinhlanu zemfundo yokuzijabulisa kwengane
I-Fussy - intandokazi encane yomncintiswano
Indlela yokubona i-manizer kumuntu
Shish kebab on skewers kuhhavini
Izinto eziwusizo zokudla kwezingane
Kungani abantu bezama ukusibonisa?
Ibhali liwumthombo omuhle wamavithamini
Isaladi nge-sea kale
Indlela yokuzila ukudla okunomsoco
I-BWT inikeza izimoto ezimbili ze-Mercedes-AMG emidlalweni ye-DTM
Izinto eziyishumi awudingi ukuzenza empilweni yakho yomndeni
Ukupheka kwezidlo ezigcwele zokulahlekelwa isisindo
Izakhiwo eziwusizo ze-gelatin yokudla
I-Oily ne-Nut Cream
Izindlela zokupheka ezivunywa futhi eziphumelelayo nezinqubo ze-cold evamile kanye nesususitis kubantwana nakubantu abadala